NAMANJE SIYAVUKA | Scrolla Izindaba
Ukugubha usuku lwabesifazane, abakwa-Scrolla.Africa bahlangane nabesifazane abanamandla kakhulu ezindaweni ezinzima zaseNingizimu Afrika.
Impilo yokuba ngowesifazane onesitolo sokudayisa utshwala akusiyo into yomuntu onenhliziyo encane
USputnik ungowesifazane onesitolo sokudayisa utshwala.
Ubaba wakhe, isosha le-ANC, uHosia Maruping Seperepere washonela ekudingisweni e-Tanzania kowezi-1981.
Wakhula ngesikhathi sezinsuku ezimnyama zobandlululo, elwa namaphoyisa ayehlomile ezitaladini zelokishi lase-Alexandra.
Kwinhlolovo yakhe nabakwa-Scrolla.Africa esitolo sakhe sokudayisa utshwala ( esivaliwe ngenxa yokumiswa kotshwala), uMary-Anne Seperepere- odume ngelikaSputnik- uthe impilo yaselokishini akusiyo eyabantu abanezinhliziyo ezincane.
Omakhelwane bakhe bazokutshela ukuthi uSputnik ufundise abesilisa kanye nabesifazane abaningi ukuziphatha ngokusebenzisa ‘i-Chinese kicks’ lena akuphakela yona uma usumnyathele izinzwane.
Kusukela kowezi-1984, uSputnik ubelokhu edayisa utshwala ekhaya lakhe, ibhizinisi alithatha ngemuva kokhuthi ubhuti wakhe edlule emhlabeni.
“Sengike ngaboshwa kaningi ngoba bengilwa namaphoyisa uma esihlasela ngenxa yokudayisa utshwala.
“Bebesiphuca bonke utshwala bethu besiphoqa ukuthi sikhiphe imali eningi ukuze bezosibuyisela bona. Ngesinye isikhathi, kwakubanzima ngempela ngize ngilwe nabo ngokomzimba ukuhlenga ibhizinisi lami.
“Besizenzela amabhomu ethu ngophethiloli. Kuthi uma amaphoyisa ephonsa i-tear gas kithi bese siwajikijela ngamatshe kanye nangamabhomu ephethiloli,” uyasho.
Manje akazesabi izigebengu: ” uma kukhona umuntu ongisukelayo, ngiqondana naye mathupha. Angiyisebenzi indaba yokuhamba indlela engaphumeleli negcindezelayo yokuyobika emaphoyiseni bese ngemuva kwalokho ngyaphoxeka ngamadokoto amacala azolahlwa nje ngoba ngingemuntu walutho.”
“Amaphoyisa aphenya kabanzi futhi ashushisa amacala alabo abanephrofayili ephezulu ukuze bezokhushulwa esikhundleni. Hhayi thina esidla imbuya ngothi,” uyasho.
Uthi isibonelo sakamuva nje sokuqondisa umuntu omsukelayo bekungesendoda ebikade izama inhlahla ngokumcela uthando.
USputnik uthe ngosuku uMengameli uCyril Ramaphosa amemezela ngalo izinga lesihlanu elinzima lomvalelo, naye wanikiza loyo owesilisa ‘umvalelo ophelele’…
“Ngangingeke ngisamelana nengcindezi ephuma kule ndoda eshadile engicela ukuthi ngiyithande.
“Wayengenandaba ukuthi ngimchiliza kangakanani, wayelokhu ebuyile.
“Ngacasuka kakhulu ngagcina sengimshaya.
“Ngosuku olulandelayo wabuya futhi ehamba nobhuti wakhe efuna ukuziphindiselela. Ngangingabesabi nhlobo. Bengifuna ukubashaya bobabili, kodwa baphunyula ngaphambi kokuthi ngidedele izimpama zami ezishisayo.
“Ngizoshona ngingowesifazane ojabulile ngemuva kokushaya le ndoda. Ibewuhlupho,” uyasho.
Uthi leyo ndoda lokhu yagcina lapho ukumsongela.
Ngale kokuboshelwa ukudayisa utshwala, uSputnik uthe ukewaba ohlangothini oluphambene nomthetho ngoku:
1. Ukushaya umuntu ngenhloso yokumulimaza umzimba (GBH) ngemuva kokushaya owesifazane obekade evimbe indela yakhe yokwedlula ngemoto
2. Ukuthatha ngozwane ngemuva kokuthatha iwashi lomunye owesifazane obefike endlini yakhe
3. Umonakalo ononya wempahla- ukubhidlisa izindonga zendlu yendoda ebizama ukuyakha eduze nekamelo likabhuti wakhe osewadlula emhlabeni
“Ngesikhathi ngiya enkantolo ngokushaya umuntu (GBH), ngatshela imantshi ukuthi ingilahlele ejele iminyaka engaphezulu kwemihlanu.”
“Alikho nelilodwa icala lami elaholela ukuthi ngigcine ngigwetshiwe. AmaJaji njalo ayingikhulula ngokuntuleka kobufakazi,” uyasho.
Uthi impilo yakhe hhayi ukuthi ibandakanya udlame kuphela nezimpi. ” Ngisise imindeni eminingi ehluphekayo endaweni yangakithi”.
“Bengike ngikhokhe imali yesikole yalezo zingane abazali bazo ababengakwazi ukuyikhokha.
“Sengingcwabele imindeni eminingi ebingakwazi ukunikeza abathwandiweyo bayo abangasekho emhlabeni imingcwabo enesizotha.
“Ngingumuntu olungile,” uyivale ngezinyembezi.